Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] - Page 2
51 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 22nd March 2010, 12:58 pm
52 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 22nd March 2010, 6:20 pm
တခြာ: hacking site တွေ သိသေးရင် မျှဝေပေးပါအုန်နော် အစ်ကို အစ်မ တို့ရေ
website sharing ထဲမှာရှိတယ်
53 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 31st March 2010, 9:11 am
Gmail cookies stealing ...လုပ်နည်းပြောပေးပါလားအစ်ကို
54 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 5th April 2010, 9:43 pm
JS မတတ်ခင် HTML တတ်အောင်သင်ပါ
HTML မတတ်ခင် Website တွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်နေတယ်။
[You must be registered and logged in to see this link.] & www ဆိုတာကြီးက ဘာတွေ IP ဆိုတာ ဘာတွေဆိုတာ သိအောင်လုပ်ပါ
အဲဒါတွေ အကုန်တတ်ပြီ JS ကိုလည်း ပိုင်နိုင်ပြီ ဆိုရင်တော့ Cookie Stealing ကိုတောင် ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်နေလောက်ပါပြီ.
55 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 6th April 2010, 7:09 pm
အဲ ဟက်ဖို့ဆိုရင်တော့ html လေးတော့ မသိရင်တော့ ဟက်ကာလို့မပြောနဲ့
ညီသိရင် tut သင်ပေးနော် အစ်ကိုကအဲဒီနည်းကိုစမ်းတုန်းမအောင်မြင်သေးဘူး
အဲ cookies ရရင်တော့လာထား အဲဒီအပိုင်းတော့ နည်းနည်းသိတယ် ကလိပေးမယ်
အော် $ƴǩǾ ရေ cookies stealing လုပ်နည်းတင်ပေးဦးနော်
56 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 6th April 2010, 8:53 pm
မြိတ်သား wrote: အဲ ဟက်ဖို့ဆိုရင်တော့ html လေးတော့ မသိရင်တော့ ဟက်ကာလို့မပြောနဲ့
Ahh! HTML မသိတာနဲ့ Hacker မဟုတ်ဘူးဆိုပါလား!!!
ကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့ ဒီလောက် လမ်းကြောင်းပေးထားပြီးပြီမဟုတ်လား။
မရေမရာလား။ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် လုပ်နေမယ့်အစား တစ်ခုခုကို အတည်တကျသေချာ Basic ကနေစ လေ့လာပါလား
Tutorial ဖတ်ပြီးလုပ်မယ့်အစား ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင် လုပ်ကြည့်ပါ။
လူအထင်ကြီး မခံချင်ပါနဲ့။ လူတိုင်းက သူ့အလိုလို အထင်ကြီးလာအောင် နေကြည့်ပါ.
57 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 6th April 2010, 9:00 pm
ကျနော် ပြောတာ လွန်ချင်လွန်သွားမယ်ထင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ပြောတာတွေ တကယ် စေတနာနဲ့ပြောတာပါ။
$ƴǩǾ လည်း နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
58 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 7th April 2010, 7:20 pm
ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီ တစ်ခုကိုပဲ့ professonal ဖြစ်ချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် လူလိုနေတယ်ဗျာ
အတူတူလေ့လာမယ်လူ သို့ ပြိုင်ဖက်တစ်ယောက်ယောက်ပေါ့
ကျွန်တော်ကလူအထင်ကြီးအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာပြောတဲ့ opera ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော် online ပေါ်မှာဘယ်လိုနေတာလဲဆိုတာကိုသိချင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့လူတိုင်းကတော့ အပေါ်ယံပဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာပါကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်
တစ်ချို့ ဟက်ကင်းတွေကို ကို spider ပြောသလို show off ပြလိုသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
59 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 7th April 2010, 11:34 pm
ဒေါင်းကြည့်ကြည့်ပါ .. လူလည်ကျပုံကို
ကျွန်တော်လည်း သွားရင်းလာရင်း မျက်နှာဘုတ်အုပ် ( Facebook Freezer လေးတခုတွေ့ တယ် ) ... ဆိုးဘူးဗျ
pass : hack-tech.com
credit : NDL
နောက်ချင်ပြောင်ချင်တယ်ဆို စမ်းသုံးကြည့် ;D ;D ... dun use Forever Box
Loading ဘားလေး 2-3 ခါ လောက်ဖြတ်ပြီးမှ Target Facebook Account Freeze // Unable to log-in ;D ;D ;D ;D ;D
60 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 8th April 2010, 10:41 am
ဒီလိုဖြစ်နေလို့နောက်လို့ ရဘူးဖြစ်နေပါ၏။
61 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 8th April 2010, 10:20 pm
solakoko wrote: နောက်ချင်ပြောင်ချင်တယ်ဆိုသော်လဲ
Windows Update မလုပ်ရသေးလို့ လား ? ဒါမှမဟုတ် Widows Update လုပ်တုန်းက .Net Update ကျန်ခဲ့တာနေပါလိမ့်မယ်
62 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 8th April 2010, 10:38 pm
.Net Framework v2 နှင့်အထက် install လုပ်ဖို့ လို လို့ပါ ။
63 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 17th May 2010, 10:21 pm
Link မြင်ရင် လက်အငြိမ်မနေဘဲ နှိပ်တာတို့ ၊ သူများပြောတိုင်း ယုံတာတို့ ၊ တစ်ဖက်သားကို အထင်ကြီးလွယ်တာ(မြန်မာနိုင်ငံသား အများဆုံး) တို့ နဲ့ အခြားအားနည်းချက်ဖြစ်စေတဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးတွေ ၊ အကျင့်လေးတွေရှိနေရင်တော့ password အလုံး ၁၀၀ ပေးလဲ မလုံပါဘူး။ ကိုယ့်နဲ့ အနီးဆုံးနေတဲ့သူက ကိုယ့်
password ကို ယူဖို့ အလွယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ၀်။
ဒါပေမဲံ့keyloggerမျိုးတို့လိုကမေ့တတ်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲဒါကspace bar ဘဲဗျာ။ကို့ရဲ့Passwordကို space bar နဲ့သာခြားသွားရင်အစဉ်ပြေနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။trial version ဆိုရင်တော့ task:ထဲကလည်းဝင်ပိတ်နိုင်ပါသည်။Full version တော့တစ်ခါမှမသုံးဘူးဖူး......နည်းနည်းရွီးကြည့်တာ
64 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 31st May 2010, 8:03 pm
အကိုတို့ရေကျတော်ကိုလဲကူညီပေးပါအုံး ကျတော်က Hack ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး ကျတော်သုံးနေကြမေးက၀င်လို့မရတော့လိုပါ တစ်ချားသူတစ်ယောက်ပဲ Hack သွားတာလား မသိဘူး ကျတော့မေးက [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ မရင်တုံးကသုံးတဲ့ PW က 0944404609 ပါ ကူညီပေးကြပါအုံးနော် ...................
65 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 31st May 2010, 9:46 pm
yehtut1991 wrote: အကိုတို့ရေကျတော်ကိုလဲကူညီပေးပါအုံး ကျတော်က Hack ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး ကျတော်သုံးနေကြမေးက၀င်လို့မရတော့လိုပါ တစ်ချားသူတစ်ယောက်ပဲ Hack သွားတာလား မသိဘူး ကျတော့မေးက [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ မရင်တုံးကသုံးတဲ့ PW က 0944404609 ပါ ကူညီပေးကြပါအုံးနော် ...................
နည်းလမ်း ၁ .... security question ကို ဖြည့် ပြီး အကောင့်ကို ပြန်ယူပါ....
နည်းလမ်း ၂ .... secondary email က နေ password recovery ပြန်လုပ်လိုက်ပါ....
နည်းလမ်း ၃ .... အကောင့် အသစ် ဖွင့်လိုက်တော့ [You must be registered and logged in to see this image.]
ကြိုက်တဲ့နည်းလမ်း သုံးလို့ရတယ်နော် [You must be registered and logged in to see this image.]
66 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 8th August 2010, 1:36 pm
တညျနရော : မြောက်ဥက္ကလာ
ဟုတ်ကဲ့ စမ်းဖို့တော့ ယူထားလိုက်ပြီးဗျာ
67 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 26th August 2010, 12:04 am
ကိုကျော်မင်း ဘယ်လိုများလုပ်ထားတာလည်း အဲလို့ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်ကိုလည်းသင်ပေး ပါ့လား
သိချင်လို့ ပါ ဟဲ ဟဲ
68 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 10th September 2010, 7:50 am
sofrware3ခုလိုမယ် but 1 ခုကတော်တော်ရှာရခက်တယ် ။ impremium software ဆိုလားဘဲ .....ရှာကြည်.ပေါ.
69 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 12th September 2010, 1:11 pm
မထက်မြတ် wrote: ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကျွှန်မကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဒီဆိုဒ်ကိုပြောလိုက်လို့ပါရှင့်
သူများအကောင့်ကို စိန်ခေါ်လို့ဟက်ချင်တာတော့ ထားပါတော့လေ စိန်ခေါ်တဲ့သူကလည်းခေါ်တာကိုး
ဒါပေမယ့် ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီးတော့တင်မထားသင့်ဘူးဗျာ
gmail တောင်းပြီး အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီတောင်းသင့်တယ်ဗျာ
70 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 12th September 2010, 4:43 pm
MITR ဖိုရမ်သည် Hacking ဖိုရမ် မဟုတ်ပါ။
အကောင့်တွေကိုလည်း အခကြေးငွေဖြင့် Hacking လုပ်ဆောင်ခြင်းလည်းမရှိပါ။
အသင်းဝင်အချင်းချင်း ပညာဖြန့်ဝေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရာဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ MITR ဖိုရမ်သည် နည်းပညာ ပြန်လည် ဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ခြား Guest တွေနဲ့ အသင်းဝင်တွေအထင်လွဲမှားမရှိအောင် ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။
71 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 24th September 2010, 2:58 am
[You must be registered and logged in to see this link.]ခင်ဗျား။
ပထမဦးဆုံး Keylogger သုံး...ဒုတိယအနေနဲ့ Phishing လုပ်...တတိယအနေနဲ့ တော့.....လွတ်အောင်ပြေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်...
တတိယနည်းက တော်တော်အန္တရာယ်များလို့လား။ သင်ပေးပါလားခင်ဗျား။
72 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 3rd March 2011, 2:33 pm
ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်အကောက်ကိုဟက်ထားလား မဟက်ထားဘူးလားဘယ်လို့ ကြည့်ရလဲဆိုတာကိုဘဲ့သိချင်ပါတယ်...
အဖြေစောင့်နေမယ်နော်..ကိုကိုတို့ မမတို့ 
73 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 23rd June 2011, 1:36 pm
ဘုရား ဘုရား gmail ကို ဟက်ချင်နေကြပါလားနော်။ငါတို့ forum ကိုပြသနာရှာနေကြတယ်နော်။
74 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem]